ထိပျတိုကျတှတေ့ာထကျ ဖှဲ့စညျးပုံရဲ့ ပေးထားခကျြတှကေို ဦးစားပေးသငျ့ – Voice of Myanmar
” စဈတပျနဲ့ထိပျတိုကျတှတေ့ာကိုဘဲ ဆကျတိုကျဆကျတိုကျလုပျနမေယျဆိုရငျ ကနျြတဲ့လုပျငနျးတှပေါ ရှမေ့ရောကျဘဲနဲ့ နှောငျ့နှေးတာပွညျသူတှရေဲ့နစေ့ဉျဘဝအတှကျ မတိုးတကျတာ အငျမတနျထိခိုကျတယျ” ကိုကိုကွီး (ပွညျသူ့ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ)
ပွညျသူ့ပါတီ (PP) အနနေဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှဘေယျလိုရှေးပွီး ပါတီကွီးတှနေဲ့ ဘယျလိုပူးပေါငျးမှာလဲ? တိုငျးရငျးသားဒသေတှငွေိမျးခမျြးရေး ဘယျလိုမူဝါဒခထြားလဲ? ဆိုတာအပါအဝငျ ပါတီရဲ့ မူဝါဒတှေ၊ နိုငျငံရေးခံယူခကျြတှနေဲ့ ၂၀၀၈ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေပျေါခံယူခကျြတှကေိုသိနိုငျဖို့ ပွညျသူ့ပါတီရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကိုကိုကွီး ကို ဗီအိုအမျအယျဒီတာခြုပျ ကိုနလေငျးက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားတဲ့ ရုပျသံအစီအစဉျကို ရှုစားနိုငျပါပွီ ။
#voiceofmyanmar #VOM #PP #ကိုကိုကွီး #ပွညျသူ့ပါတီ
ထိပ်တိုက်တွေ့တာထက် ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ပေးထားချက်တွေကို ဦးစားပေးသင့်
” စစ်တပ်နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့တာကိုဘဲ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါ ရှေ့မရောက်ဘဲနဲ့ နှောင့်နှေးတာပြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအတွက် မတိုးတက်တာ အင်မတန်ထိခိုက်တယ်” ကိုကိုကြီး (ပြည်သူ့ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ)
ပြည်သူ့ပါတီ (PP) အနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဘယ်လိုရွေးပြီး ပါတီကြီးတွေနဲ့ ဘယ်လိုပူးပေါင်းမှာလဲ? တိုင်းရင်းသားဒေသတွေငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်လိုမူဝါဒချထားလဲ? ဆိုတာအပါအဝင် ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေ၊ နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေနဲ့ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်ခံယူချက်တွေကိုသိနိုင်ဖို့ ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုကြီး ကို ဗီအိုအမ်အယ်ဒီတာချုပ် ကိုနေလင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို ရှုစားနိုင်ပါပြီ ။
#voiceofmyanmar #VOM #PP #ကိုကိုကြီး #ပြည်သူ့ပါတီ